20 nooc oo tayo sare leh serif | Abuurista khadka tooska ah
Barashadu waa shay aan marnaba ka bixi doonin qaabka, hadaba maanta waa markiisii ​​loogu talagalay serif-ka xarfaha noocyada:
ka gracias, serifs, Isku dayga yoolka o terminal waa qurxinno yaryar oo badanaa ku yaal dhammaadka khadadka jilayaasha qoraal ahaan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan ereyga Ingiriisiga sida serif. Fariimaha Times, Georgia, Garaam y Courier waa tusaalooyin qaababka nooca leh koofiyad noocan ah.
Warshadaha daabacaadda waxaa loola jeedaa noocyada sanduuqa sans serif sida sans-serif (laga bilaabo Faransiis sans: "la'aan"), ama sida xunxun (ama, gudaha Alemán, grotesk), si kastaba ha noqotee ereyadan looma isticmaalo inta badan marka laga reebo jargon qoraal ahaan.
Waxaan u maleynayaa in badan oo idinka mid ah horay u ogaayeen, laakiin waligood dhib malahan in la barto waxa serif yahay iyo sababta loogu adeegsado farta culus. Boodka ka dib waxaa jira 20 nooc oo serif ah oo diyaar u ah hagaajinta naqshadahaaga.
3 gaaska gaaska
4 Tareenka dhulka hoostiisa mara
8 Bangle caadi ah
10 Heerkii Hore TT Bold
11 Weydiisay ilaahay
13 Dinaar naxaas ah
14 Cudurka Seriffic
15 Garbaha loo yaqaan
16 Daar font
17 Dhexdhexaadiyaha Ringbearer
20 Geesiga Fasalka Shaqeeya
Bangle caadi ah
Heerkii Hore TT Bold
Dinaar naxaas ah
Garbaha loo yaqaan
Geesiga Fasalka Shaqeeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 20 nooc oo tayo sare leh